अहिले आयो तिम्लाई जनमुक्ति सेनाको याद ? « janaaastha.com
अहिले आयो तिम्लाई जनमुक्ति सेनाको याद ?
प्रकाशित मिति : १८ माघ २०७७, आईतवार ०८:३५
पछिल्लो साता झण्डै १५ वर्षपछि साथीहरु हालखबर सोध्न आए । भाइसाथीले के गर्ने भनेर सोधे, अग्रजले के गर्छौ नानी भने ।
मसला पिस्ने हातले बारुद पिस्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षित गर्ने तत्कालीन कमाण्डर अर्जुनलाल श्रेष्ठ अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा छन् । अर्जुनलालसँगै म जीवनमा पहिलोपटक कम्मरमा बाँधेको टिएनटी ग्रिनेड सम्झन्छु, देब्रे काँध हुँदै दाहिने कम्मरमुनि झुण्ड्याएको भरुवा बन्दुक सम्झन्छु । पहिलोपटक पड्किएको बन्दुक र त्यसबाट निस्किएको बारुदको मीठो गन्ध सम्झन्छु । प्रमाणित छापामार भएपछि औषधिको झोला, बन्दुक, कलम र क्यामेरा बोकेर युद्धमोर्चामा निस्किएको कुराले अहिले पनि काउकुती लगाउँछ ।
शान्तिसम्झौतापछि लड्दालड्दैका सिपाही हामीलाई ७ मुख्य र २८ सहायक शिविरमा थन्क्याइयो । त्यसपछि शुरु भयो वर्ग परिवर्तन र उत्थानको अभ्यास । त्यसपछि शुरु भयो सर्वहाराबाट बुर्जुवाकरण । शान्ति र क्रान्तिका नाममा धोकाका श्रृंखला । परिवर्तनका नाममा सिपाही र जनतामाथि विश्वासघात । हाम्रा भावना र विचारमाथि अत्याचार । समग्रमा हामी बाटो गुमाएका बटुवा भयौं र अहिलेसम्म त्यही रूपमा छौं ।
हिसाब गर्दै ल्याउँछु, जसले सहादत प्राप्त गरे तिनका परिवार बिलखबन्द छन् । जो घाइते र अंगभंग भए तिनी पनि जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । जो बेपत्ता भए तिनको कुनै खबर छैन । जो अयोग्य करार गरिए तिनलाई पनि कुनै सहानुभूति र सहयोग मिलेन । र, १५ वर्षपछि निर्जीव रूखमा पालुवा किन पलायो ? निर्जर बालुवामा सिँचाई कसरी भयो ?
भनिदिने कोही छ भने हाम्रा तत्कालीन सुप्रिमोलाई भनिदिए हुन्छ, १२ वर्षअगाडि अनमिनले अयोग्यको ठप्पा लगाइदिएर, गोजीमा १० हजार हालिदिएर निकालिएका सिपाही आज फेरि तिम्रालागि कसरी योग्य हुन्छन् ? कलिलो उमेरमै वर्गशत्रु खत्तम गर्न भर्ना गरिएका तिम्रा २ हजार ९ सय ७३ सिपाही अहिले कहाँ–कहाँ के गर्दै छन् ? कहाँ छन् तिम्रा १८ हजार योग्य र ४ हजार अयोग्य सिपाही ? दुश्मनको शीर छेदन गर्दा योग्य हुने, तिमीलाई सत्तामा पु¥याउन योग्य हुने तर तिमी सत्तामा पुगेपछि अयोग्य हुने परिभाषामा बाँधिएका कहाँ छन् ती सिपाही ? ऊ बेला तिमीले भनेको दायित्व पूरा गर्‍यौ ? निभायौ आफ्नो कर्तव्य ? खोई तिम्रा सीपमूलक कार्यक्रम ? होइन भने १० वर्ष (२०६८ असार) देखि आन्दोलनमा उत्रिएका तिम्रा पूर्वसिपाहीले के पाए ? कहाँ पुग्यो तिम्रा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका फोस्रा पोका ?
निःसन्देह अहिले पनि जनमुक्ति सेना नेतृत्वविहीन छन् । न तिनको कुनै संगठन छ न भए पनि कुनै प्रभावकारिता । प्रचण्ड, बैद्य, बाबुराम, बादल, किराँती, बिष्ट, आहुती सबका आफ्नै मण्डली मात्र छन् । त्यस्ता मण्डली जो समग्रमा होइन अंशमा मात्र जनमुक्ति सेनाको आदर्श बोक्छन् । र, तिनलाई अहिले जनयुद्ध दिवशमा अनुपस्थित हुने नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले साखुल्ले पल्टेर तान्न खोज्दैछन् । अहिले बजारमा उनीहरूको लिलामी शुरु भएको छ । बोलकबोल लागेको छ । यसमा पनि दुईथरी डम्फु बज्न थालेको छ । एउटा पूर्वजनमुक्ति सेनालाई अनेक प्रलोभन देखाएर अलगथलग गर्न चाहन्छ । त्यसैले घाइते, अपांगको निःशुल्क उपचार र प्रमाणपत्र, थप एक दुई लाखको हड्डी फालिएको छ । अर्को पुरानो बिरासतको व्यापार गर्न चाहन्छ । केरुङबाट ल्याएर धुन्चे, त्रिशूली, ककनी हुँदै बालाजुमा मैजारो गरिएका च्यांग्रासरह खरिद, बेचबिखन गरिएका लडाकुलाई भावनात्मक सौदाबाजी गर्न उद्यत छ ।
हिमालमा, पहाडमा, तराईमा, अरबमा, खाडीमा, झाडीमा रहेका पूर्वजनमुक्ति सेनाको एकाध व्यक्ति र कमाण्डर संकलन गरेर सबै हाम्रो भन्ने दाबी कसैले नगर्दा हुन्छ । हामीलाई बेचेको मूल्यमा केही वर्ष सत्ताको स्वाद लिएका नेतृत्वहरूले हेक्का राख्दा हुन्छ, सत्ता स्थायी होइन । हामी संगठित र एकत्रित भएको बेलामा तिम्रा नेतृत्व पनि स्थायी नहुन सक्छन् । प्रिय कमाण्डरहरू ! अपहेलना र अवमूल्यनको मूल्य तिम्रो आँतमा प्राण भर्नु मात्र होइन भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ । कमाण्डरहरू दास हुँदैमा सबै सिपाही दास हुनुपर्छ भनेर कुनै शास्त्रमा नलेखिएको पनि हुन सक्छ ।